Diyaar, Dab, Ujeeddo | Martech Zone
Fiidnimadan waxay ahayd habeen weyn oo lala qaatay xoogaa caan ah oo iibin, suuq geyn iyo khubaro caan ah. Waxaa naloo casuumay makhaayad aad u wanaagsan oo ku taal qol gaar ah. Ujeedada kulanku waxay ahayd in la caawiyo qof ay wada shaqeeyaan oo doonayey inuu meheraddiisa gaadhsiiyo heerka ku xiga… ama dhawr heer oo dhaafsiisan halka uu hadda joogo.
Qolka ayaa waxaa ku yaalay heshiis tan ah… tuso waxa ay tahay inaad ku sameyso jumlad keliya, cadee astaamaha aad ku kala duwanaan karto, sameyso hanaan aad ku iibineyso adeegyadaada iyadoo lagu saleynayo qiimaha aad keentay, ku xir shabakadaada si aad u ogaato rajada ugu sareysa ee suuq geynta iyo sameynta summad ka kooban waxa aad miiska la imaato.
Uma baahnin inaan ku raacsan ahay tan… laakiin taasi waa xoogaa shaqo xoog leh, maahan? Waxaad ku shaqeyn kartaa sanooyinkan waxyaabahan… oo aad dib ugu laaban kartaa sabuuradda maxaa yeelay ma guuleysan.
Aniga oo xushmad iyo qadarin u haya asxaabteyda, marwalba waan yara shakisanahay marka khabiiradu bixiyaan noocan qorshaynta istiraatiijiyadeed iyo talo. Waxaan si daacad ah uga shaqeynayay gudaha iyo hareeraha waaxyaha suuq geynta in kabadan labaatan sano hada mana ka fekeri karo hal qorshe suuqeyn oo shaqeynayay sidii qorshuhu ahaa.
Daacadnimo dhan, waxaan u maleynayaa in badan oo ka mid ah hadalladan ay yihiin uun poppycock.
Gabi ahaanba ma ahan wax qashin ah… Waxaan aaminsanahay in fikirka istiraatiijiyad ahaan ay muhiim tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka jihada guud ee bartilmaameedku tahay ka hor intaadan jiidin kicinta. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa in qof uu marka hore dab qabto oo aan hadaf u sameeyo halkii aan ka shaqeyn lahaa bilo si aan u sameeyo tallaal laga yaabo inuu ku dhaco ama uusan ku dhicin gabi ahaanba.
Had iyo jeer waxaan arkaa ganacsiyada oo guuldaraysta intaanay weligood runta jiidan. Aad bay uga baqayaan fashilka oo way curyaan yihiin weligoodna dhab ahaan uma qaataan khataraha lagama maarmaanka u ah inay hore u socdaan. Ka eeg hareerahaaga meheradaha guuleysta. Ma guuleystaan ​​maxaa yeelay waxay u qorsheeyeen si bilaa cillad ah? Mise way guuleystaan ​​maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo kacsan oo awood u leh inay hagaajiyaan istiraatiijiyadooda sida dalabaadka rajadooda, macaamiishooda iyo warshadooda loo baahan yahay?
Waa maxay aragtidaadu? Khibrad?
Tags: Ujeedadafalanqayntadabkaistaraatijiyad marketingdiyaar
Qiimaha Waxqabadka Booqdaha
Foomka Xiriirka, Bots, iyo Feejignaanta Ceeb la'aanta
Oktoobar 25, 2010 at 11:03 PM
Waxaan u maleynayaa inaad saxan tahay inta badan. Aniga waxay ila tahay inay kuxirantahay waxaad qabanaysid iyo sida aad ugu kalsoontahay inay wax mudanyihiin in kor loo qaado. Waxaan ula jeedaa waa mararka qaar inay aad muhiim u tahay in la helo qorshe rasmi ah oo meel yaal oo leh ujeedo iyo ujeedo. Waxay ka caawinaysaa dadka fulinaya qorshaha inay dhab ahaan kusii socdaan. Si kastaba ha noqotee, qorshahaas gudahiisa waxaa loo baahan yahay fulin ka badan qorshaynta. Xeeladaha bilowga ah maalmo yar gudahood ayaa loo rogi karaa. Taasi waxay u baahan tahay isbeddel deg deg ah.
Si aad isweydaarsigaaga waxyar uga qoto dheerto, ka fikir haddii aanad ujeeddo haba yaraatee lahayn ka hor intaadan shaqada ka eryin. Waad garaaci kartaa bartilmaameedka, laakiin waxaad u badan tahay inaad gebi ahaanba waayi doonto, ama aad garaaci lahayd saaxiib, ama naftaada. Taasi waa sababta aan ugu fikirayo inay tani aad ugu tiirsan tahay sida aad ugu kalsoon tahay fikradda ama ganacsiga (sida weyn ee bartilmaameedku u weyn yahay).
Marka si aan isugu soo wada ururinno - jawigan tartan ee aan ku wada jirno, waxaan u baahanahay inaan si deg deg ah u higsanno bartilmaameedka iyo dabka, ka dibna dib-u-hiigsanno oo mar labaad dabka u qaadno, ka dib runtii dib-u-hiigsanno oo aan mar kale u dab qabadsiino. Ama bring Kaliya qoriga qaata.
Oktoobar 25, 2010 at 11:04 PM
Midkaan kuula jiraa Aniga oo ka imid hay'ad nus-weyn ah oo xawaaraha lagu qiyaasay bilo iyo nus sano iyo "istiraatiijiyad + helitaankeeda" sax ay ahaayeen 15 sanadood oo machad ah ayaan arkay qiimaha ay leedahay dhaqaaqa sida aan u bilawnay in aan ku dabaqno qaab cusub hawlgalka ganacsigeena . Hada socodsiinta suuq-geynta bilowgii ahaa, markii aan bilaabay, ka yar kooxda suuq-geynta ee aniga ii shaqeysay qodobkaagu waa ka sii muhiimsan yahay. Khibradaha wadajirka ah ee xubnaha sare ee kooxda waa inay ku filnaadaan inay kuu jiheeyaan jihada saxda ah. Noqoshada dhaqdhaqaaq iyo inaad si joogto ah u sii fiicnaato waxay ku saabsan tahay heer sarre hawl socodsiin ah… xirfad la yaab leh oo badiyaa la iska indhatiro oo loogu talagalay kooxaha soo koraya
Oktoobar 25, 2010 at 11:10 PM
Gabi ahaanba waan ogolahay, Brian! Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in inta badan waqtigayga firaaqada ah aan ku qaato akhriska iyo barashada natiijooyinka kuwa kale si aan u ogaado jihada bartilmaameedka 'ay tahay'. Waxaan kaliya ka walwalsanahay in shirkado badan aysan waligood qaadin talaabada ugu horeysa. Isla markaaba kuma fashilmaan sabab khaldan… laakiin ugu dambayntii way fashilmaan sida kuwa kale u dhaafaan.
Oktoobar 25, 2010 at 11:24 PM
Haa waan ogolahay. Ma aanan arag suuq geyn xun marka hore laakiin waxaan sii wadaa maqalka sheekooyinka shirkadaha waayeelka ah ee runtii la halgamaya dadaalada suuq geynta bilowga ah Iyagu ma helayaan sidaa darteed qorshooyinka adduunka oo dhan kama caawinayaan inay bartaan casharrada dhabta ah ee ay u baahan yihiin si ay mar labaad u higsadaan oo ay u toogtaan mar labaad mana ku celceliyaan si dhakhso leh oo ay dhibaatada ku xalliyaan.
By habka, taasi waa isbarbardhig weyn. Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan kiiskan. Waad ku saxsan tahay kaliya inaad ogaato halka bartilmaameedku yahay waana hubaa inaad dareen aad u weyn u leedahay taas. Dadka qaarkiis sidaas maahan. Ayaa garanaya haddii qorshayntu caawiso, laakiin nin waxaa jira dadka qaar oo kaliya cagaha isku toogta suuqgooda. (Waa inaan idhaahdaa, waxay sifiican ugu habboon tahay)
Oktoobar 26, 2010 at 12:30 AM
Doug waan kula heshiin kari waayey wax badan. Ubucda qofka aan ahay waa: SAHAN-YARE. Ilaa iyo inta ganacsatadu tagto waxaan ku saabsan ahay hiigsiga mustaqbalka iyo qaadista talaabooyin kasta oo lagama maarmaan u ah halkaa Waxaan aaminsanahay xeelado. Waxaan aaminsanahay qorsheynta. Si kastaba ha noqotee, waa inaan qirto inaanan waligay sameynin "qorshe ganacsi" dhaqameed.
Sanad ka hor waxaan la sheekeystay mudane. Xitaa ma xasuusto magaciisa. Waxaan ku kulannay markii ugu horeysay kulan quraac ah oo aan labadeenuba ka qeyb galnay xaafadda Castleton, Indiana. Waxay ahayd mid ka mid ah "istaagida-in-baarkinka-badan-in ka badan-saac-ka dib-kaliya-aad la kulantay-wadahadalka" oo si uun ayaan ugu nimid mawduuca abuuritaanka qorshe ganacsi. Waxaan u qirtay inaanan weligay abuurin qorshe ganacsi oo dhaqameed. Wuxuu i weydiiyay "Miyaad qorsheysaa waqti kasta oo aad dhaqso uga hesho bangiga meheraddaada yar?" Waxaan ugu jawaabay, "Maya." Markaa ha ka welwelin qorshe ganacsi, ayuu yidhi. Asal ahaan, wuxuu igu yidhi "Dab iyo Ujeeddo." Wuxuu igu dhiirrigeliyey inaan raaco niyadayda ganacsi oo aan baxo oo aan guuleysto.
Oo sidaas Doug taasi waa waxa aan qabanayay 3dii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii aan bilaabay 'Cross Creative' bishii Oktoobar ee 2007. Sidaas awgeed Dhalasho Wacan oo ku socota shirkaddayda iyo sannado badan oo guulo ah annaga labadaba sida aan ugu dadaalno inaan ugu adeegno damacyada kiciya na soo kici maalin kasta oo cusub! Waa maalin ku weyn inaad ganacsade noqotid.
Oktoobar 26, 2010 at 6:55 AM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, Doug. Curyaannimada falanqaynta kaliya maahan calaamadaha shirkadaha waaweyn. Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha ganacsiyada yaryar ayaa ka baqaya in tallaabo qaldan iyana la qaado. Waxqabadka, oo leh qiyaaso lagu qiimeeyo guusha, waa istiraatiijiyad wanaagsan. Nasiib wanaag wuxuu jecel yahay geesinimada.
Oktoobar 26, 2010 at 1:07 PM
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay Doug, Dabacsanaanta waa magaca ciyaarta maanta. Fikirka istiraatiijiyadeed maanta waa inuu ku jiraa awoodda si dhaqso leh loola qabsado suuqa weligiis isbeddelaya.
Oktoobar 26, 2010 at 3:19 PM
Tani waa sababta ganacsatada runta ah ee guuleysta ay ganacsiyo u bilaabaan… ka dibna ka iibiyaan kuwa istiraatiijiyadda ah ee si aad ah u hadla “poppycock” oo aan weligood mid keli iska bilaabin.